Ithegi: pixel | Martech Zone
Igunya elibanzi lomthetho elibizwa ngokuba nguMmiselo woKhuseleko lweDatha Jikelele, okanye i-GDPR, yaqala ukusebenza nge-25 kaMeyi. Umhla obekiweyo unabadlali abaninzi beentengiso zedijithali abaxakekileyo kwaye abaninzi banexhala. I-GDPR iya kufuna irhafu kwaye iya kuzisa utshintsho, kodwa iyatshintsha abathengisi bedijithali kufuneka bamkele, bengoyiki. Yiyo le nto: Ukuphela kweModeli yePixel / yeCookie esekwe kwiShishini Inyaniso kukuba oku bekudala kakhulu. Iinkampani bezirhuqa iinyawo, kwaye